Maalinta AIDIS-ka oo caalamka laga xusayo iyo Dr. “Dufle” oo ka hadlay halista cudurka – Radio Muqdisho
Maalinta AIDIS-ka oo caalamka laga xusayo iyo Dr. “Dufle” oo ka hadlay halista cudurka
Munaasabado lagu maamuusayo maalinta AIDS-ka aduunka oo loo aqoonsaday 1-da December oo ku asteeysan maanta, ayaa lagu wadaa ineey ka dhacaan magaalada Muqdisho iyo qeybo ka mid ah gobollada dalka.
Dr. Cismaan Xaaji Maxamuud “Dufle” oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ahna mudane ka tirsan Baarlamanka oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ka warbixiyay halista cudurka iyo sida loogu baahanyahay in bulshada looga wacyigeliyo.
Dr. “Dufle” ayaa sheegay in cudurkani uu yahay dilaa, islamarkaana ay u geeriyoodeen malaayiin dad ah, isagoo intaa ku daray in cudurkani uu aad ugu yaryahay dalkeena, wuxuuna hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay in bulshada laga wacyigeliyo cudurkan.
Wuxuu sheegay Dr. “Dufle” in Tobankii sano ee ugu dambeeysay uu cudurkan hoos u dhacay, taasina waxa ay ku timid ayuu yiri, dadaal farabadan iyo wacyigelin dheeraad ah oo la sameeyay.
1-da Decembar ayaa loo aqoonsaday maalinta ADISKA aduunka, waxaana maanta laga xusayaa caalamka oo dhan, iyadoo halku dhigga sanadkan uu yahay “Gaabi cudurka”.
Xaflad lagu taageerayay dhismaha maamulka K/galbeed Soomaaliya oo lagu qabtay Minneapolis (Sawirro)